London To Paris In 2:20 ora By The Eurostar Train | Save A Train
Home > Travel Europe > London To Paris In 2:20 ora By The Eurostar Train
ny Carissa Rawson 10/09/2018
Ny iray amin'ireo tena mahazatra sy ny fomba mora indrindra mandeha eo Londres sy Paris no alalan'ny Eurostar, haingam-pandeha ny lamasinina mampifandray ny roa kapitaliny. Raha misy ny plethora ny safidy ho an'ny mpanao dia lavitra nijery ny hanao ny hop izahay, ny Eurostar mbola iray amin'ireo tsara indrindra safidy ho an'ny hafainganam-pandeha, vidin'ny, ary mora. Ny fiaran-dalamby manararaotra maka ny fantsona anaty rano tionelina, na "chunnel,” naorina teo anelanelan'i Angletera sy Frantsa mba hahazoana anao faingana tokoa ny toerana halehany.
Ity ambany ity, dia afaka mahita ny tsipiriany rehetra ianao no mila hanampy anao mitantana ny London ho any Paris Eurostar dia.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra mpanjifa momba ny fiarandalamby Travel ary Izy no nanaovana Save A Train, Tranonkala tapakila mora indrindra any Eropa.
Alohan'ny manomboka, aoka ny tarehimarika avy ny antony tena tsara indrindra Eoropa no za-draharaha amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby Tsidika- sady koa anie, kaontinanta ity efa nonenana nandritra ny an'arivony taona, izay midika hoe ny foto-drafitr'asa no matetika tena mandroso. Fomba hafa ny fitaterana dia misy mora, fa misy zavatra mba azo lazaina ho ny lehibe fitaoman'ity fiaran-dalamby mandeha. Marina indrindra izany fa ny fotoana voalohany mpandeha, izay afaka manararaotra ny fandaharam-potoana fiaran-dalamby tao an-tsambo mba mitsambikina fotsiny dieny mbola tsy miainga. Izany dia mifanohitra Eoropa lalina ny seranam-piaramanidina, izay misy ny ambany indrindra tonga ny fotoana alohan'ny lasa dia adiny roa, fara fahakeliny,, ary mandany fotoana sy vola fanampiny commuting amin'ny seranam-piaramanidina toerana.
Raha niresaka ny Travel fotoana, Eoropa dia malaza ho haingam-pandeha ny lalamby, izay lavitra ny rivotra, mankao outstrip motorways sy inconveniently toerana seranam-piaramanidina. Fiaran-dalamby manerana ny kaontinanta dia haingana sy matetika mivantana, izay midika hoe kely kokoa ny fotoana sy ny fotoana bebe kokoa commuting trandrahana.
Gara koa ny tombony azo amin'ny ho conveniently toerana ho lehibe sy manintona mpizahatany toerana, noho izany dia mora ny dingana eny ny fiaran-dalamby sy ny lohany mivantana ny toerana halehany.
London mankany Brussels Eurostar Trains
London mankany Paris Eurostar Trains
London mankany Amsterdam Eurostar
Famandrihana ny Ticket amin'ny Eurostar A Train
Iray amin'ireo lafin-javatra tsara indrindra amin'ny fandehanana amin'ny lamasinina anelanelan'ny fiaramanidina dia ny Eurostar dia mihazakazaka hatrany an-tampon-tanàna mankany afovoan-tanàna. Tsy toy ny seranam-piaramanidina lavitra toy ny London Heathrow ary Paris Charles De Gaulle, ny fiaran-dalamby avy any London miala St-Pancras Iraisam-pirenena, ary tonga ao amin'ny Gare Du Nord, izay afaka mora foana ny mandeha rehetra tao an-tanàna ho hitan'ny olona ny tsara indrindra.
Araka ny voalaza, Eurostar rehetra dia ahitana tapakila roa farafahakeliny tapa- entana ary ny tanana kitapo. Raha toa ianao nitondra entana be dia be, dia afaka ihany koa ny hifidy ny iray kilasy ambony tapakila izay mamela ny hitondra bebe kokoa kitapo. Mifanohitra, airlines teti-bola dia mety hitandrina tsy noho ny voalohany Bookings, fa ny kitapo sy ny seza saram safidy hametraka ny fiampangana haingana.
Tapakila vidin-javatra noho izany dia mazàna no miovaova be be dia be, ka dia mampiseho mividy tapakila raha vao afaka ianao. ankapobeny, ireo tapakila mandeha amidy telo volana mialoha, na dia arakaraka ny vanim-potoana ihany koa ianao dia afaka mahita azy ireo hatramin'ny enim-bolana mialoha. Tsy fahazoan-dalana mampiasa ny vohikala mba hahitana ny fiaran-dalamby sy ny Bokin'i tapakila, izay tonga dia mandinika misy lisitra rehetra mba hahazo anao ny vidiny vidiny azo atao, azo antoka.
London mankany amin'ny fiaran-dalamby Antwerp Eurostar
Lille mankany London Eurostar Trains
London mankany Strasbourg Eurostar Trains
Londres mankany Rotterdam Eurostar Trains
Pricing Ary Karazam-Tickets
Ny fiaran-dalamby miasa Eurostar telo-kilasy cabins, arakaraka ny teti-bola. Ho an'ireo mitady hahazo fotsiny avy amin'ny toerana iray hafa, tapakila kilasy faharoa dia ny safidy tsara indrindra. Ireo amin'ny raharaham-barotra fa tsy mandeha dia mety kokoa ny Standard Premier na Business Premier tapakila, na izay mamela anao hipetraka amin'ny kilasy voalohany mpanazatra ary manome sakafo mandritra ny dia, koa avelao hianatra kely momba ny tapakila fiaran-dalamby ao London mankany Paris:
Rehefa efa voalaza teo aloha, Pricing miovaova araka ny Travel daty, ka ianao te-boky indray mandeha fisian'ny manokatra. Raha boky lavitra ampy mialoha, ianao no mitady ny vola momba ny 55 dolara iray-lalana, na 90 dolara mandroso sy miverina. Miandry mandra-pahatongan'ny minitra farany dia afaka manery ny vidiny lanitra-avo, amin'ny vola lany efa ho famerenana indroa ny taty aoriana no hividy ny tapakila. Marina izany ho an'ny mandroso sy miverina, ary ny iray-lalana tapakila.
Tsara ny manamarika fa ny Eurostar dia tsy natao ho an'ny rehetra ireo izay mihazona ny lalamby mandalo, ka raha te-hanao izany dia ho toa marina sy takatry, Hividy ny lamasinina tapakila mialoha. Afaka mahita fiarandalamby tapakila amin'ny internet ao amin'ny tranonkala isan-karazany, na lamasinina vidin'ny tapakila dia azo ampitahaina inflated Save A Train.
Calais mankany London Eurostar fiaran-dalamby
Bruges mankany Londres Eurostar London
Ny fiaran-dalamby ho any London Eurostar
Berlin ho any London Eurostar fiaran-dalamby
Check-in ao amin'ny St-Pancras London Station
Arakaraka ny saran-dalana kilasy, ianao te-tonga amin'ny gara ny lasa, fara fahakeliny, 40-60 minitra talohan'ny nialan'ny lamasinina tao London mankany paris. Raha toa ianao ka nametraka tapakila Premier Business Premier Class avy any Londres toParis, ianao afaka mampiasa fandraisam-bahiny ny manokana. Raha tsy izany, maro ny toeram-pivarotana sy trano fisakafoanana misy ho anao ny peruse. Ny sasany ny toerana tena ahitana toeram-pisakafoanana:
AMT Coffee – Ny fivarotana kafe amin'ny toerana roa ao anatin'ny toby. Manolotra tanana zava-pisotro, ary tanteraka compostable kaopy, izay mahatonga ny tontolo iainana tsiky.
The barika Vault – A nentim-paharazana anglisy Pub fa tolotra asa tanana labiera, tena Ale, tadivavaran'ny, kafe, sy ny fanahy. Izany ihany koa ny sakafo maraina sy ny mahazatra manompo Pub saran-dalana.
Chop'd – A fahasalamana-mifantoka trano fisakafoanana, Chop'd manolotra isan-karazany ny lasopy, salady, sakafo ketsaketsa Fonosiny rehetra sy ny karazana mpandeha.
Raha toa ka ianao ihany no manao ny andro lavitra, ny gara dia manasongadina ihany koa ny entana ankavia-toerana ho anao mba hitahiry ny entana. Ireo safidy ireo fitehirizana mora vidy, ary matetika manolotra asa fanompoana maharitra ora.
Cologne mankany London Eurostar Trains
indray mandeha onboard, ny tontalin'ny fotoana Travel avy any London ho any Paris dia eo ho eo 2 ora sy 16 minitra. Rehefa mitambatra amin'ny mialoha lasa tonga, ny fotoana dia tanteraka dia ho manodidina 3 ora.
Araka ny voalaza teo aloha, misy Wifi maimaim-poana onboard, mba hahafahanao haharaka ny mailaka rehetra sy ny media sosialy zavatra ilaina. Arakaraka ny tapakila, dia afaka ihany koa ny loha tsy mahazo manao amin'ny fisakafoana mpanazatra, any amin'izay hahitanareo sakafo, zava-pisotro sy ny tsakitsaky. Raha toa ianao mipetraka ao amin'ny kilasy voalohany-efitra, ny sakafo dia ho entina mivantana any amin'ny toerana.
Dusseldorf mankany Londres Eurostar London
Leuven mankany London Eurostar Trains
Tonga amin'ny Gare Paris Du Nord Train Station
Fiaran-dalamby avy any St. Pancras peo tonga eo afovoan'ny Paris, tao amin'ny Gare du Nord-peo. Ity fiantsonana tsara tarehy dia asan'ny ato mihitsy, sy ny lafin-trano ivelany naorina ao amin'ny tapaky ny 1800, ary tsara foana. Makà fotoana kely mba hankafy ny trano teo anoloan'ny sasin-tenin'ny avy hitsidika ny tanàna.
Satria ianao efa vita maso-in talohan'ny nandaozany ny UK dia tsy tokony hamita ny fahatongavan'i dingana. Izany no marina ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanaraha-maso pasipaoro, na amin'ny UK fa namela ny Vondrona Eoropeana dia azo inoana fa ireo dingana tsy maintsy hijaly fiovana manan-danja.
Rehefa tonga, ianao ho ao am-pon'ny tao an-tanàna, amin'ny am-polony ny safidy ho an'ny sakafo, toeram-pivarotana sy ny zava-pisotro. Raha misafidy ny handao ny toby, ho hitanao ny teo akaiky teo Brasserie gara farany Nord, malaza Art Nouveau hotely fisakafoana fomba mivantana manerana ny lalana avy any amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby. Raha tsy izany, ilainao fotsiny any an misy tari-dalana mba hahita ny sasany amin'ireo tsara indrindra sy ny zava-pisotro sakafo any Eoropa.
Ao anatin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby mihitsy, dia hahita Metro ary RER fiarandalamby, ary koa ny fiaran-dalamby mandeha manerana an'i Frantsa. Lalamby an-toerana sy ny fiaran-dalamby Metro afaka anareo rehetra manerana ny renivohitra frantsay, ho an'ny maro tranombakoka, lalan-, ary ny mpizaha tany attractions ao anatin'ny.
Raha tonga ianao maraina koa Aho ka sasin-tenin'ny mivantana avy mba hitsidika anatrehanao jereo-in ny trano fandraisam-bahiny, dia mety koa ho hevitra tsara ny manararaotra ny ankavia-entana ny safidy hita ao amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby. Ireo trano fitehirizana dia somary lafo, ary mety ho safidy tsara ho an'izay mitady ny hahabetsaka ny androny.
Amin'ny maha-mpihazona ny Eurostar fiaran-dalamby mivantana tapakila, ianao afaka hahazo 2 for 1 fahazoana maro amin'ireo tranom-bakoka sy ny lalan-, izay afaka hamonjy anao-jatony dolara.
Frankfurt mankany London Eurostar Trains
Munich mankany London Eurostar Trains
Marseilles mankany Londres Eurostar London
Train Times Fa London To Paris Amin'ny Eurostar
Ny Eurostar mitantana matetika, amin'ny niakatra ho any 19 ny fiaingana isan'andro miankina amin'ny fety sy ny faran'ny herinandro. Ny lamasinina voalohany ny andro miainga amin'ny 05:40 ary itondray tanteraka ny 2 ora sy 37 minitra. Izany no matetika no iray amin'ireo mora indrindra tapakila misy, koa raha tsy nisalasala ny nifoha maraina koa ianao afaka mamonjy vola ary mitodi-doha teo am-aina ny mangiran-dratsy. Soa iray hafa ity dia lasa tany am-boalohany fa ny andro vao tonga tao Paris no 09:17, izany hoe manana iray andro mialoha anareo ho asa izay te hisafidy.
Route fotoana ireo fa raha tsy izany isan'ora na mihoatra, izay manome anao be dia be ny safidy izay hifidy. Ny fiaran-dalamby farany amin'ny alina miainga amin'ny 18:31 ary tonga amin'ny 21:47, namela anao betsaka ny fotoana mandeha any aminao trano fandraisam-bahiny, na dia mitodi-doha ho an'ny ny tara-alina sakafo sy-pijery amin'ny jiro mamirapiratra ao amin'ny Tour Eiffel. Ireo fiarandalamby alina dia mety manasongadina natory fiara, izay fomba tsara haka minitra vitsy alohan'ny hanohizany ny torimaso eo amin'ny dalana. Fanampin'izany, mahazo mitety faritra sasany fiarandalamby malaza eo amin'ny toerana nandritra ny alina.
Den Helder mankany London Eurostar Trains
Maastricht mankany Londres Eurostar London
Dijon mankany Londres Eurostar London
Làlan-dàlana hafa miaraka amin'ny lalamby Eurostar izay tsy London London
Raha ity lahatsoratra ity dia mifantoka indrindra amin'ny mandeha eo St. Pancras International Station sy Gare Du Nord, ny Eurostar miasa ihany koa maromaro mivantana lalana avy any London:
Brussels – Lamasinina mihazakazaka rehetra 90 minitra 2 ora. Mitaky fotsiny ny 2 ora maro mba hahatongavana Brussels Midi / Zuid toerana.
Calais / Frethun- Lamasinina mihazakazaka isan'ora na mihoatra avy any London sy tanteraka fiaran-dalamby mandeha fotsiny ny adiny iray.
kely- Lamasinina miala saika isan'ora ho any Lille, Tanàna any amin'ny faritra avaratr'i Frantsa. Misy fifandraisana mora ho an'ny frantsay TGV tambajotra ho anao ny famindrana. Journey ny fotoana dia eo ho eo 1.5 ora.
Disneyland Paris – Lamasinina mihazakazaka imbetsaka isan-kerinandro nandritra ny taona am-pianarana, ary isan'andro nandritra ny fety. Ny gara tsara ivelan'ny Disneyland fidirana. Ilay dia maka ambany 3 ora ny fitambaran'ny.
Lyon, Avignon, sy Marseilles- Mandritra ny taona ny fiaran-dalamby miasa avy 1 ny 5 andro isan-kerinandro, na dia seasonally fiantraikany anie no mba antoka Izany dia midika hoe mihazakazaka rehefa mila. Tsy mijanona amin'ny Lyon Part-Dieu-peo (4.75 ora), Avignon TGV-peo (6 ora) ary Marseilles St Charles-peo (6.5 ora).
Amsterdam sy Rotterdam – Ny asa fanompoana vaovao izay nanomboka tamin'ny 2018, fotsiny ianao maka iray amin'ireo isan'andro fiaran-dalamby ho any Amsterdam, izay ahitana ny fijanonana any Rotterdam. Dalana tanteraka ny fotoana dia mikasika ny 4 ora.
Misy vanim-potoana hafa lalana azo fiaraha-mientana toy ny ririnina tia manao ski ambony, dia aza hadinoina ny mijery indray matetika mba hahitana raha fanompoana dia nihazakazaka.
Tena azo atao mba hitoriana koa ny toerana hafa ao Eoropa amin'ny alalan'ny fampiasana tokana nijanona vetivety sy ny fanohizana nifindra avy teo peo hita ao Lille, Brussels, ary Paris. Mahazo mora ny tapakila fiaran-dalamby ary tsy mitaky afa iray faritany haleha izy.
Toy izany koa, raha ianao handeha ho any Londres amin'ny toeran-kafa any Angletera, dia azonao atao ny misafidy ny hanomboka ny Eurostar handeha amin'ny Ebbsfleet Stations Iraisam-pirenena na iraisam-pirenena Ashford Station fa tsy St. Pancras. Izany no tena manampy ny olona amin'ny fiara, toy ny Ashford manolotra fiantsonan'ny garazy sy mivantana ny fidirana ho any amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby.
Boky Tickets Amin'ny Save A Train ho an 'ny London To Paris Train
Search ny toerana ny tapakila ho boky rehetra Eoropa Ny toerana tsara indrindra, anisan'izany ny Belzika, Italia, Soisa ary ny UK (anisan'izany ny London ho any Paris lamasinina amin'ny Eurostar). Ny fikarohana dia natao mba afa-bola rehetra tsy misy tapakila famandrihana sy ahitana saram. Tsy ho mora ho anao ny mividy amin'ny alalan'ny fomba maro fanekena karama, anisan'izany ny carte de crédit, Giropay, mety tsara sy ny maro hafa.
Noho izany, na inona na inona ny antony lavitra, na ianao mandeha irery na miaraka amin'ny olon-kafa, maka minitra vitsivitsy hitady fiaran-dalamby tapakila ao amin'ny Save lamasinina, izay tolotra ny ambany indrindra ny vidiny, azo antoka.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana? kitiho eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/london-paris-train/ – (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / andehilahy ny / nl na / fiteny azy sy ny maro hafa.
Train Tsidika, Train Travel Aotrisy, Train Travel Belzika, Train Travel Frantsa, Train Travel Alemaina, Train Travel Italia, Train Travel Soeda, Train Travel Soisa, Train Travel UK, Travel Europe
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Jun 2020Jul 2020Aug 2020Sept-pahatonga ny taona 2020Oct 2020Nov 2020Dec 2020Jan 2021Feb 2021Mar 2021Apr 2021May 2021